Ọbịbịa ndị ọbịa nke Guyana: ịrị elu 16%
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ọbịbịa ndị ọbịa nke Guyana: ịrị elu 16%
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Guyana • investments • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Guyana na-eto eto dị ka ebe ịhọrọ ndị njem. N'ihe dị ka Disemba 31st, 2018, Guyana dekọtara ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa bịara nke ndị njem 286,732; Onu ogugu 15.93% si na ndi 247,330 ndi Guyana nabatara na 2017.
N'ime afọ ndị gara aga, Guyana Tourism Authority arụ ọrụla n'ịwelite profaịlụ nke Guyana site na mmụba ngwaahịa, mmụba ọrụ na ịzụ ahịa niche. Nke a gụnyere ịga ahịa azụmaahịa dịka American Birding Expo, ITB, na Ahịa Azụmaahịa Worldwa. Afọ 2018 hụrụ mgbanwe dị ukwuu na mbọ ahịa ahịa GTA. Emepere weebụsaịtị ọhụrụ na usoro mgbasa ozi mmekọrịta; Emebere nnọchite ahịa n'ahịa ahịa isi nke US, Canada, UK na Germany; na Guyana Tourism Authority kwadoro ọtụtụ azụmaahịa, mgbasa ozi na mmetụta FAM na njem - ebumnuche nke ịmatakwu banyere Guyana na ịchụso ihe dị n'etiti ndị njem na-achọ ezigbo, ọdịdị, njem na ahụmịhe ọdịnala.
Dabere na Nationstù Njem Nleta Tourwa nke Mba Ndị Dị n'Otu (UNWTO) onye ọbịa bụ onye njem na-eme njem gaa isi ebe ọ na-anọghị na gburugburu ebe obibi ya, maka ịnọ abalị ruo ihe na-erughị otu afọ, maka ebumnuche ọ bụla (azụmahịa, oge ezumike ma ọ bụ ezumike ebumnuche onwe onye ọzọ) ọzọ karịa ịbụ onye ọrụ bi na mba ma ọ bụ ebe eleta. Ọ bụ ezie na hedlọ Ọrụ Ọdụ Internationalgbọelu International Cheddi Jagan mere mkpesa ọnụ ọgụgụ mbata nke ndị njem nke mmadụ 325,800, ọnụ ọgụgụ ndị Guyana Tourism Authority nwudoro bụ nke ndị ọbịa bịara nke ọma, na-agbaso nkọwa UNWTO.
Na nke mbụ, Guyana ahụwo mmụba dị ukwuu na ụfọdụ ahịa ahịa isi ya dịka US (mmụba 8.28%), Europe (mmụba 11.82%) na mba ndị ọzọ dị na Caribbean (ịrị elu 28%).
Ndị njem na-abịa Guyana ịnụ ụtọ oke mmiri ozuzo ya na savannah ọla edo nke Rupununi, ụmụ amaala obodo ha nwere ebe obibi na ebe obibi ya na Essequibo na Demerara Osimiri, ihe omume ndị Guyanese dị ka Bartica Regatta na Guyana Carnival, na ọtụtụ ewu ewu na-ewu ewu nke ha niile, ebube Kaieteur Falls. Ogige Ntụrụndụ Kaieteur dekọtara ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa 8,195 na-adọrọ mmasị ndị njem nleta na 2018, nke bụ ịrị elu 10% karịa afọ gara aga.
Guyana kwadoro nzukọ OAS CITUR na Machị 2018 na Nzukọ ICAO Air Transportation na Nọvemba 2018 nke hụrụ ọtụtụ ndị isi mba ụwa, ndị ha niile nwetara ngwaahịa njem njem Guyana.
Mịnịsta na-ahụ maka azụmahịa Dominic Gaskin, onye nwere ọrụ maka njem, kelere mbata ndị ọbịa bịara dị ka ohere maka ọtụtụ obodo, ndị mmadụ na ndị azụmaahịa itinye ego na ngwaahịa ndị njem. Onye ozi ahụ kwuru na “okwu onyinye ndị njem njem pụrụ iche nke Guyana na-erute ọtụtụ mmadụ gburugburu ụwa yana akara aka Guyana na-aga n'ihu dị mkpa”. Gọọmentị, ọ gbakwụnyere, “ga-aga n’ihu inye nkwado na nkwado dị mkpa dị ka nkwalite mpaghara ahụ. Ngalaba na-ahụ maka njem nlegharị anya na Guyana Tourism Authority ga-anọgide na-arụkọ ọrụ na ndị ọ bụla metụtara ihe a na-eme Living Guyana Tourism Strategic Action Plan 2018-2025. ”
Brian T. Mullis, Director nke Guyana Tourism Authority kwuru na “nke a bụ nnukwu ihe Guyana rụzuru. Anyị na-amalite ịdọta ọtụtụ ndị njem na-achọ ezigbo ọdịdị anyị, ọdịbendị na ahụmịhe anyị na ahịa anyị. Visitbawanye nleta pụtara ego ịbawanye na Guyana nke na-enye elele na mpaghara niile. Njem nleta bụ ahịa nke atọ kachasị na Guyana. N'ilepụ anya n'ihu, ebumnuche anyị ịbawanye ụba nke ndị ọbịa na uru onye ọ bụla na-anọchite anya ya iji mekwuo mmetụta dị mma sitere na njem.
Site n'usoro mgbasa ozi ezubere iche, mmepe na-aga n'ihu nke ngwaahịa njem na mmụba ikuku (LIAT ụgbọ elu agbakwunyere ụzọ ọhụrụ na July 2018, na American Airlines na nso nso a malitere ije ozi ebe a na November 2018), a na-atụ anya Guyana ịhụ uto na ndị mbịambịa ya na mmelite nke ahụmịhe nke ndị ọbịa na afọ ndị na-abịanụ.
Brian ulo oru Canada weghaara Caribbean Ntu mgbanwe oke -abịa abịa obodo obodo ogbako gara n'ihu Corporation omenala omenala December choro ngalaba Ngalaba Nleta ịnya ụgbọ mgbalị gburugburu ebe obibi nwere ahụmahụ ngosi mbupụ dara -atụ Germany ọlaedo eto eto GTA Guyana ICAO metụtara mma mkpali ego mụbara na-amụba ụmụ amaala Airportgbọ elu mba itinye ego ITB ulo oru Oge ntụrụndụ Mpekarị Ụgha Living Nọrọ -achọ njem ahịa etiti nzute onye ozi kasị ewu ewu ogige ntụrụndụ nke mba ọdịdị nbsp ọhụrụ ebe ụzọ ọhụrụ Niche November mme uwa isi na-aga n'ihu ohere n'èzí n'otu ntabi anya nọrọ abalị park njem gara aga onye plan ewu ewu mma ngwaahịa Profaịlụ nzube mmiri ozuzo regatta akụkọ Ihe ngosi ntụrụndụ ibu ọrụ osimiri ụzọ akuku ngalaba na-eje ozi na-egosi dị ịrịba ama -elekọta mmadụ elekọta mmadụ media ndi ozo -anọ usoro atụmatụ ewere onye na-ahụ maka njegharị ngwaahịa njem njem nlegharị anya ahia egosi ahia iga ahịa njem Onye njem ndị njem njem njem United Nations UNWTO mbụ uru esenowo mbịambịa ahụmịhe ndị ọbịa website nabatara okwu Arụ ọrụ Njem nleta ụwa Òtù Njem Nleta Ụwa njem ụwa Ahia ahia mba uwa